नायिका शिल्पा शेट्टीले कुर्थामा सुरूवाल लगाउनै बिर्सिएपछि हंगामा ! – Dailny NpNews
नायिका शिल्पा शेट्टीले कुर्थामा सुरूवाल लगाउनै बिर्सिएपछि हंगामा !
प्रकाशित मिति: शनिबार, आषाढ १९, २०७८ समय: १५:३२:५७
४५ बर्षिय शिल्पा शेट्टीको तस्वीर हेरेर व्यक्तिहरूले उनको फेसन सेन्सलाई खिल्ली उडाए र कमेन्ट गरे कि उनी प्यान्ट लगाउन बिर्सिन सक्छिन। बलिउड अभिनेत्रीले शिल्पा शेट्टीको ड्रेसलाइ लिएर मानिसहरूले ट्रोल गरिरहे ।
बलिउड अभिनेत्रीले शिल्पा शेट्टीको ड्रेसलाइ लिएर मानिसहरूले ट्रोल गरिरहेका छन।
शिल्पा शेट्टीले यी तस्वीरहरु सामाजिक सन्जालमा सेयर गरेकी छिन यी तस्बिरहरु केही पुराना हुन। शिल्पा उमेरले केही पुनानी भए पनि यिनले नयाँ फेसन सेन्सलाइ विशेष ध्यान दिएर अगाडि बढ्ने गर्छिन । शिल्पा फेसन र नया स्टाइलमा उमेरको प्रवाह नगरी अगाडि बढ्न खोज्ने नायिका हुन ।
शिल्पाले केहि तस्बिरहरु साझा गरेकी छिन। तर यी तस्बिरलाइ मानिसहरुले ट्रोल गर्दै भन्छन शिल्पा पाइन्ट लगाउन बिर्सेउ।
शिल्पाको यो आउटफिट ड्रेस हेर्दा कुर्ता जस्तो देखिन्छ। यो कालो भुइ मा अरु रङ मिक्स भएको को हो र दुबै पक्षबाट का-टिएको छ। शिल्पासँग उनका छोरा पनि छन्। शिल्पा छोरालाइ डोर्यायर बाटोमा हिडेकी छिन छोराले आमाले लगाएको ड्रेसतिर हेर्दै ममि सबै देखिएको छ भनेको छ।
उनको यी तस्बिरले एक समय निकै तहल्का नै मच्चाएको थियो ।